Iimagazini ezi-3 kunye namava ama-5 endawo ye-geomatic-Geofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Iimagazini ezi-3 kunye namava ama-5 endawo ye-geomatic
Kulixesha lokuphonononga amanye amaphephancwadi aphelelwe nguqulelo lwangoku nje; Apha ndishiya amava amanqaku anomdla avela kwiphephancwadi yakutsha yamaphephancwadi.
1 Amava omsebenzisi ekusebenziseni i-Open Source GIS Software.
Kuyathakazelisa ukufunda eli nqaku, elisibonisa ukuba yintoni abantu be-Intetics ekusebenziseni izixhobo ... nangona impumelelo enkulu ijikeleze i-Quantum GIS, bayayichaza indlela abayisebenzisa ngayo ingca kunye ne-gvSIG kwezinye iinkqubo. Ixabiso loku kukunyaniseka kokukhankanya into ebasebenzeleyo kunye nento eyayingelula kangako.
2. Idatha ye-LiDAR.
Amava ka Drakkar usibonisa ukuba kunokwenzeka njani ukuba sidibanise i-armatuste yethu kwaye sakha idatha yethu ye-LiDAR.
UJames Fee usitshela ukuba kutheni iPython ibonakala ingumhlobo obalaseleyo weGIS
U-Ryaboshpako uchaza ukuba kwenzeka njani ukudala iinkonzo zewebhu ukusuka kwi-GeoPDF.
3. Ubukrelekrele beJografi efini
Eli nqaku nguDenilson Silva, ochaza amanyathelo okuqala ukusebenzisa i-ArcGIS Online kunye ne-ArcGIS Explorer iinkonzo ukulungiselela nokusetyenziswa kwedatha.
Elinye iphephancwadi, eliyi-edition ye-71, linesihloko esinomdla kakhulu esithemba ukuba siza kufumaneka ngesiSpanish.
Ukulawulwa koomasipala ngokuchanekileyo
Imephu yeenjongo zeendawo
UValenty Gonzalez phakathi kwe "Ngubani na"
ISO 19152 kunye neModeli yeLADM eBrazil
Nangona ndibonisa ukuba ujonge i-portal ngesiSpeyin, ngoku ikhona ikopi ye-70 equke iinjongo ezifana nale:
Inxalenye yokuqala yokufumana ngaphezulu kwiGoogle Earth
Izibalo zeemarike zeseti
Inxalenye yokuqala yeendlela zokuphakamisa
Inyaniso yangoku yeemoto zengqwelo ezingenakunyulwa
4. Iintlawulo endaweni yeerhafu
La ngamava esiXeko saseBoston, ekudala iminyaka esokola nengcinga ephambeneyo yokuba amaziko, izakhiwo kunye neepropathi zihlawula endaweni yeerhafu. Kubonakala ngathi isicwangciso esiphumeleleyo ukusukela ngo-2008 ukubheka phambili sinokubaluleka esinokuthi sikukopele kwimeko yethu.
5 Inkqubo enkulu yezothutho zikawonke-wonke i-BRT (i-Bus Rapid Transit) kunye nophuhliso lweedolophu lwaseLatin America.
Ndithethile ngale nto kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ngaphakathi kwesakhelo esenzeka eTegucigalpa, eHonduras. Ewe, uDaniel Rodríguez kunye noErik VergeL tovar benza umboniso obalaseleyo ofanele ukuqokelelwa.
Bona amanye amaphephancwadi
Idesktop yeSuperGIS, uthelekiso oluthile...